Visits : 2810
1. StandardStandard ဆိုတာကတော့ မိမိဆိုင်၏ ရောင်းချနေသော ပစ္စည်းများကို တစ်ခုခြင်း ထည့်သွင်းသည့် ပုံစံကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ဥပမာ - မိမိ၏ ဆိုင်သည် စတိုးဆိုင် ဆိုပါစို့။Overtine ဗူး၊ Ensure ဗူး၊ Brand ငှက်သိုက်၊ နို့ဆီဗူး စသည့် ရောင်းချနေသော ပစ္စည်းများကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရောင်းချသည့် အရေအတွက် အလိုက် Inventory မှ အလိုအလျောက် နှုတ်သွားပါမည်။...
Visits : 3929
HR နှင့်ပတ်သတ်၍ သင်သိသင့်သော လှို့ဝှက်ချက် ၅ ချက်လူသားရင်းမြစ်။ HR ရဲ့ ပိတ်ထားတဲ့ တံခါးပေါက်နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေရှိမှာလဲ၊ သူတို့ပုံစံကြည့်ရတာ လုပ်ပိုင်ခွင့် တော်တော်ရထားပုံပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့တစ်တွေဟာ ခင်ဗျားရဲ့ ရှေ့နေလား ၊ ခင်ဗျားရဲ့ ကိုယ်စားလှည် မန်နေဂျာလား၊ HR နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရေးကြီးပြီး သိသင့်တဲ့အချက်တွေကို ဖေါ်ပြပေးချင်ပါတယ်။၁။ HR သည် သင်၏ရှေ့နေမဟ...
Visits : 4168
Visits : 2875
121 - 126 of ( 154 ) records